Showexif ပုံအတွက် Exif ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံကိုအင်တာနက်မှမယူပါက၊
ကွယ်လွန်သူ၏ဓာတ်ပုံ၏ဘယ်ထောင့်တွင်အနက်ရောင်တိပ်ကိုချိတ်ထားသင့်သနည်း။ ဒီကိုဘယ်မှာရှင်းလို့ရမလဲ။ ဘယ်ညာညာအောက်ခြေမှာ ... ဒီတိပ်ခွေကိုများသောအားဖြင့်ညာဘက်အောက် (သို့) အပေါ်ထောင့်မှာချိတ်ဆွဲထားသည်။ သော်လည်း ...
GP PowerBank Quick3အားသွင်းစက်သည်နှစ်မိနစ်ခန့်အနီရောင်ကိုထွန်းပြီးအားကုန်သွားပြီး၊ များသောအားဖြင့်ဘက်ထရီများအလုပ်မဖြစ်တော့ပါ။ ငါမှတ်ဉာဏ်အတူတူပဲ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အညွှန်းကိန်းအနီရောင် ...
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်၏ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာကိုအဘယ်ကြောင့်မမြင်နိုင်သနည်း ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ။ digicam ကို usb မှတစ်ဆင့် laptop ထဲသို့ဖြည့်သွင်းလိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းဖိုင်တွဲသည်ဗလာဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကွန်ပျူတာကင်မရာကိုမမွငျနိုငျသောကွောငျ့, nm အတွက် ...
plagiarism အတွက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ plagiarism မပါဘဲဓာတ်ပုံတွေရှိနေသေးသလား။ အကယ်၍ သင်သည်စာရေးသူထံမှဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ၀ ယ်လျှင်၊ ရင်းမြစ်ကိုကြည့်ရှုရန်မရှက်ပါ။ လျောက်ပတ်သောကင်မရာများသည်မူပိုင်ခွင့်ကိုကူးယူနိုင်သည်။
Flash Drive တစ်ခုမှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။ on nubuck ပေါ်တွင်သင်က၎င်းကို memory slot ထဲသို့ထည့်ပြီး nubuck ကိုကြည့်ပါ။ nubuck သည်ဖိနပ်နှင့်ပရိဘောဂများဖုံးအုပ်ထားသောသားရေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lightroom ရုရှားဗားရှင်းကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးလင့်ခ်ပေးပါ cwer.ru Adobe Photoshop Lightroom 4.1 Portable Russian version http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html Lightroom ကိုအခမဲ့ download ရယူရန် http://shareflare.net/download/29740.2884d448ca5eda324b7fb989fe9a/2kravv38 ။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအရပ်၌ download လုပ်ပါ။
လှိမ့်သောရှပ်တာဘာလဲ ဤသည်မှာပုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်မတူညီသောအချိန်များ၌ဖော်ထုတ်သည့်အခါရိုက်ကူးမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တိုတိုပြောရရင်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့သည်။
Crop သည်သီးနှံ၊ ကင်မရာအစရှိသဖြင့်မည်သည်ကိုရိုက်သနည်း။ Photoshopper, mark (ဆိုလိုသည်မှာ mark1-mark4၊ pyadwak မဟုတ်ပါ) - သတင်းထောက်၏ကင်မရာသည်ပညာရှင်များအတွက်သာဖန်တီးသည်။ ထိုမိန်းမသည်ဖြတ်တောက်ခံရ)))) ...
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် JPEB FORMAT သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါက၊ မည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းမည်နည်း။ ၎င်းသည်မတိုင်မီကမည်သည့်ပုံစံပေါ်မူတည်သည် ...
အလေးအနက်မေးခွန်း။ တစ် ဦး ပေါင်းစပ် input ကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု input ကိုမှကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သူမဆိုသိလား? တူညီတဲ့အပေါက်တွေတောင်ရှိတယ်။
အလေးအနက်မေးခွန်း။ တစ် ဦး ပေါင်းစပ် input ကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု input ကိုမှကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သူမဆိုသိလား? တူညီတဲ့အပေါက်တွေတောင်ရှိတယ်။ ငါ ၅ kopecks ထည့်မယ်။ Component video အရည်အသွေးသည်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ တွင်း - သင်ကိုယ်တိုင်သိ ...
ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိစံပရိုဂရမ်များတွင်ပုံ၏အရွယ်အစားကိုမည်သို့တိုးချဲ့ရမည်နည်း။ ပုံကိုဖွင့်ပါ၊ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြင့်ချဲ့ပါ၊ စာနယ်ဇင်းမျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်ပါ၊ လက်ဝဲဘက်ထိပ်ရှိ INSERT မှ Paint ဖွင့်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ run ရန်ပုံကိုအရွယ်အစားပြောင်းပါ။
ဘယ်နှစ်သည်ဓာတ်ပုံပညာပေါ်လာခဲ့သနည်း။ သူ၏တီထွင်မှုသည်ကြော်ငြာမီဒီယာအသစ်နှင့်ပုံနှိပ်ပိုစတာများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့်သတင်းစာကြော်ငြာများပါသောပထမဆုံးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြော်ငြာခြင်းကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ လန်ဒန်မှာ,…
ကင်မရာတွင် ISO ကဘာလဲ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံ (ယူအက်စ်) ၏ယူနစ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရုပ်ရှင်၏ sensitivity နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ sensitivity ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ film ပေါ်တွင်စပါးများလာခြင်းနှင့် "ဆူညံသံ" ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ...
ဉာဏ်အလင်းဉာဏ်အလင်း: အတန်းအစား ၆ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ !
ဉာဏ်အလင်းဉာဏ်အလင်း: အတန်းအစား ၆ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ! Secure Digital (SD) နှင့် Secure Digital HC (SDHC) မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များအတွက်မြန်နှုန်းစွမ်းရည် - အမြန်နှုန်း (SD ...
HDR ကဘာလဲ။ http://blyg.livejournal.com/22444.html HDR သည်မကြာသေးမီကဓာတ်ပုံပညာအတွက်ဖက်ရှင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်သာမန်ရုပ်ပုံများမှအလွန်လှပသောဓါတ်ပုံများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ HDR ...
selfie ဆိုတာဘာလဲဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေ့ကင်မရာ၊ မှန်ဘီလူးမှတဆင့်သို့မဟုတ်မှန်ဘီလူးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လှည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းဘေး။ ဒါကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမသိတဲ့အပြစ်မဲ့မိန်းကလေးပါ။ ) ...
မှန်မှန်ကန်ကန်မည်သို့ပုံရိုက်ရမည်ကိုပြောပြပါ။ GOST 32843-2004 "လူမည်းများနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အသေးအဖွဲဓာတ်ပုံများ" ကိုမလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည် GOST မှကောက်နုတ်ချက် - ၂.၆ ။ ပုံစံက ...
ဓာတ်ပုံကိုမျက်မှန်တပ်ချင်တယ်၊ ပရိုဂရမ်ကိုပြောပြပါ။ photoshop မှအပ
ဓာတ်ပုံကိုမျက်မှန်တပ်ချင်တယ်၊ ပရိုဂရမ်ကိုပြောပြပေးပါ။ Photoshop မှအပကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။ http://otvet.mail.ru/question/55959991/ Gimp, paint ။ မဟုတ်ဘူး "stylist" စသည်ဖြင့်စူပါဂူတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါမသိဘူး .... ...
78 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,928 စက္ကန့်ကျော် Generate ။